एसिडले डढाएको संगीताको सपना – Todays Nepal
सानैदेखि कि त साइन्स पढ्छु, कि खेलाडी बन्छु भन्थी,’ केही क्षणको मौनता तोड्दै चमेली मगर बोलिन्, ‘मलाई छोरीको सपना देखेर डर लाग्थ्यो। कसरी साइन्स पढाउनु, कसरी खेलाडी बनाउनु?’
चमेली कहिले क्याटरिङको भाडा माझ्थिन्। कहिले कालिमाटीबाट तरकारी किनेर फुटपाथमा बेच्थिन्। उनका श्रीमान् प्रेम पनि क्याटरिङमा काम गर्थे। छोरा पनि त्यहीँ हेल्पर। सबैको जोडबलले अभावबीच सन्तोष थियो, खुशी पनि।संगीताको सपना थियो- साइन्स पढ्ने। दोस्रो विकल्प – तेक्वान्दोको राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने। चमेलीसँग पनि केही थान सपनाहरु थिए-
दोस्रो, आफ्नोजस्तो दु:खी जीवनबाट छोरीलाई मुक्ति दिने।सपना पूरा हुनेमा उनीहरु निश्चिन्त थिए। तर, अकस्मात बज्रपात आइलाग्यो यो परिवारमा। १६ वर्षको कलिलो उमेरमा अनायसै संगीताले एसिडको राप सहनुपर्‍यो। परिवारका सपना र योजना पनि क्षतविक्षत भए।
ठ्याक्कै सात दिन लाग्यो संगीतालाई होश आउन। ‘नरुनू ममी म चाँडै ठीक हुन्छु,’ होसमा आएपछि संगीता बोलिन्। त्यसपछि सुरु भयो, प्रहरीको अनुसन्धान।प्रहरीहरु आएर सोध्थे।
तिमीलाई कसैले मन पराउँथ्यो?’तिमीलाई कसैले प्रप्रोज गरेको थियो?’कोही केटामाथि शंका छ?’कोही केटालाई नराम्रो गरेकी थियौ?’भर्खर व्युँतेकी छोरीलाई प्रहरीले गर्ने प्रश्नले चमेली छट्पटाउँथिन्। एक्लै हुदाँ रुन्थिन् पनि। तर, संगीताको अघिल्तिर मुस्कानले आँसु र दु:खलाई ढाक्थिन्।छोरी एसिड आक्रमणमा परेर जीवन र मृत्यसँग जुध्दै गर्दा आमासामुका प्रश्न उत्तिकै बिझाउने हुन्थे।
सोध्थे – तपाईँको कोही परपुरुषसँग सम्बन्ध थियो रे नि?’तपाईँकै कारण छोरीलाई बदला लिएको हो रे नि?’तपाईँको को-कोसँग अनैतिक सम्बन्ध थियो?’केरकार गर्न पुगेका प्रहरीका प्रश्न यस्तै हुन्थे। अनुसन्धानमा सहयोग गर्न जे पनि सहनुपर्थ्यो। उनी विगत कोट्याउँछिन्, ‘घाउ त उसलाई लागेको थियो। पीडा मैले पनि खेपिरहेँ।’
वसन्तपुर नव आदर्श स्कुलको प्रांगणमा छाता ओडेर उभिएकी छिन् संगीता। उनले पुरै अनुहार मफलरले छोपेकी छिन्। त्यसमाथि कालो चस्मा। जिन्सको निलो ज्याकेट र जिन्सकै प्यान्ट। अनुहार छोपिएकाले दाग देखिन्न। कस्तो धेरै गर्मी है,’ हामीलाई देख्नासाथ बोलिन्। हामी उनीसँगै डुल्न थाल्यौं, काल भैरव मन्दिरदेखि नजिकैको नाइन्टी-नाइन मार्केटसम्म। त्यही डुलाइमा उनले अतित कोट्याउँदै छिन्।
यति बिहानै कस्ले हान्यो लोला?’ सीमाको आवाज सुनियो। त्यतिन्जेल भतभत पोल्न थालिसकेको थियो उनलाई। कसैले तातोपानीले हान्यो होला’ भन्ठानिन्। दौडिँदै घर जाँदा लुगा बाटोमै फुस्किसकेको रहेछ, थाहै भएन। आमाले पानी हालेपछि थाहा भो- शरीरमा एसिड परेको। आमालाई अंगालो हालिन्। शरीर सहनै नसक्ने गरी पोलिरहेको थियो। दिमाग शून्य। त्यसपछि बेहोश।
होसमा आउँदा केएमसी अस्पतालको बेडमा। भर्ना गरेको सातौं दिन थियो त्यो। आमालाई हेरिन्, आमै बिरामी झै लाग्यो। यतिमात्र बोल्न सकिन्- ‘नरुनु आमा म चाँडै ठीक हुन्छु।’त्यसपछि देखिन् आफ्नो शरीर। आफ्नो अनुहार। संसार फनफनी घुमेजस्तो भयो। बल्लतल्ल याद भो कसैले केही फ्याँकेको- तर, को थियो त्यो? रिंगटा लाग्यो। केही ठम्याइनन्। भनिन्, ‘कतिबेला आमाहरु कतै जान्छन् र अस्पतालबाट हामफालुँ जस्तो भो। आत्महत्या गर्नेबाहेक अरु केही सोच आएन।’
अहिले पनि एसिडको घाउले भतभती पोलिरहन्छ। जिन्दगीभर नै पोल्छ जस्तो लाग्छ उनलाई। बारम्बार आत्महत्या गर्ने सोच आउँछ मनमा। सोच्छिन्- आफू मरेपछि को होला बुबाआमाको सहारा? घरजग्गा बेचेरै भएपनि सर्जरी गराउन तयार बुबाआमाको विश्वासलाई घात गर्न सक्दिनन् उनी।जीवन सकसपूर्ण छ संगीताको। अँध्यारो कोठामा निस्सास्सिएकी छिन् उनी। उनलाई नै थाहा छैन कुन मोडमा गएर के हुन्छ? भन्छिन्, ‘मलाई पहिलेको जस्तो सामान्य जीवन चाहियो। तर कसरी?’
‘मेरी फूलजस्ती छोरी। के सोचेको थिएँ, के भयो,’ भन्छिन्, ‘यो त मेरो मुटुको घाउ हो, जिन्दगीभरि दुखिरहन्छ। यस्ले मैले भन्दा धेरै दु:ख पाउँछे बाँचुन्जेल।’ आमाछोरी दुवै एक अर्कालाई हेर्छन्। चमेलीको गहभरि आँसु छल्किन्छ। बोल्न खोज्छिन् गला अवरुद्ध हुन्छ।
प्रसङ्ग फेर्न मन लाग्यो। भित्तामा टाँगिएका मेडल देखाउँदै त्यसको कुरो उप्काएँ। संगीताले मेडल झिकिन्। चमेली बोल्दै गइन् – मेरो छोरी धेरै ठाँउमा खेल्न पुगेकी छे।’यो सिन्धुपाल्चोकमा जितेको, त्यो भारतमा।’धेरै ठाउँमा अरुको भाग नि जितेर आएकी थिइ।’आफ्नै सिनियर दिदीलाई पनि जितेकी थिइ।’माहोल परिवर्तन भयो। मेडलबारे बताउँदै गर्दा आमा छोरी दुवैका आँखामा सन्तुष्टि र निराशा दुवैको भाव मिसियो। निस्किने बेलामा संगीताले करेसाबारी देखाइन्। केही तरकारी लगाएकी छिन् उनले। भनिन्, ‘दिक्क लागेको बेलामा करेसाबारीमा झरेर गोडमेल गर्छु।’
मध्याह्नको १२ बजे त्यही कोठा। चमेली उनका श्रीमान् प्रेम र संगीता सँगै छन्। प्रेम एकसाता यता बिरामी भएकाले काममा जान सकेका छैनन्। छोराले पढाइ छाडेकाले छोरीलाई धेरै पढाउने सपना थियो। त्यो सपना बाहेक अब छोरीलाई पहिले झै बनाउने सपनाको बोझ थपिएको छ। तैपनि हिम्मत हारेका छैनन्।घटनाको २८ दिनपछि जीवन विक नामका युवक पक्राउ परे। त्यतिले चित्त बुझ्ने कुरा थिएन।
विकले बयानमा ‘तल्लो जात भनेर हेपेको’, ‘संगीतासँग प्रेममा रहेको’ बयान दिए। बयानलाई ‘झुटो’ भन्छिन् उनी। भन्छिन्, ‘उसँग हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध पनि थिएन। ऊ ब्याच्लर पढ्ने, म १० मा थिएँ। बच्नका लागि धेरै झुट बोल्यो।’संगीताको कुरामा सहमति जनाउँछन् प्रेम र चमेली।
घटनापछि पटक पटक पुलिस थाना धाए प्रेम। अस्पतालमा दिनरात कुरुवा। न काममा जान पाए, न त राम्रोसँग खान नै। परिवारमाथिको त्यो बज्रपातबाट अझै उठ्न सकेको छैन यो परिवार। आर्थिक र सामाजिक रुपमा धेरै अफ्ठ्यारो छ उनीहरुलाई। बाहिर काममा हुँदासम्म ठीक हुन्छन् उनी। जब घर आएर छोरीलाई देख्छन् मन पोल्न थाल्छ, उनको अवस्था फेर्ने हुटहुटी जाग्छ। सुनाउँछन्, ‘त्यसैले छोरीको खुशीको लागि धेरै गर्न बाँकी छ। अब उसको खुशी नै हाम्रो खुशी हो।’कोठाभित्र तीनै जना एक अर्काको अनुहार हेर्छन्। बह पोखेकाले हुनुपर्छ, केही सन्तुष्टि देखिन्छ मुहारमा।
पाँच पटकभन्दा बढी सर्जरी भइसकेको छ तर पनि अझै केही नियमित सर्जरीहरु बाँकी छन्। त्यसका लागि आर्थिक जोहो कसरी गर्ने, उनीहरु अन्यौलमा छन्। उनीहरुको उदास आँखामा संगीताको जीवन र भविष्यप्रति थोरै नै सही आशाका किरण बाँकी छ। एसिडले खनेको घाउ पुर्न सके भने सायद त्यो किरणले संगीता र उनको परिवारको जीवनमा नयाँ प्रकाश फैलाउने छ, निश्चय पनि।